Yaa Ka Masuula Shiidaal Laaanta Haysata BERBERA OIL TERMINAL?...W/Q Maxamuud Ibraahim Cismaan
(Hadhwanaagnews) Tuesday, January 10, 2017 17:50:46
Shalay subax ayaan dhexsocday dhamaan degmooyinka magaalada Hargeisa, aniga oo u kuurgelaya suuqa gadista shiidaalka ama looyaqaan “GAS STATIONS”. Waxa aan lakulmay dadweynihii reer Hargeisa oo meehanaabaaya kaalmihii shidaalka, waxaana ay igu dhalisay in maqaalkan qoro si aan dareenka dhabka ah ee jira ula wadaago shacab weynahayga somaaliland islamarkaana xusuusanaya dhacdadan.
September-2015, ayaa golaha barlamaanka Somaliland cod aqlibiyada ku meel mariyeen , mooshinkii wareejinta haamaha shiidaalka ee berbera iyada oo dawladu dabada ka riixayso. Illaa maalintaa iyo illaa maantana shirkadihii ganacsatada ahaa ee meesha mas’uuliyadeedii la isku afgartay in ay dalka iyo dadkaba u hayaan waxay ku fashilmeen in ay masuuliyadii
ay hayeen sidii loobaahnaa uga soo baxaan.
Waxa ah waxa laga xishoodo oo layaab lagu tilmaamo” BERBERA TERMINAL OIL OO BILAA PERTROL AH”, mar maaha oo laba maaha inta haamaha shidaalka ee berbera laga waayay petrol. intii xilkooda ay lawareegeen qolyahan ganacsatadu ku dhawaad waa markii 5 aad ama kaba badan ee laga-waayo petrol.
Qolyihii” OIL TERMINALKA BERBERA” lagu wareejiyey waxay ka jawaabi karila’yihiin waxa ka qaldan. Kasii darane shacabkii reer somaaliland waxa jahawareer kuriday cidii la xisaabtamilahayd ee loobaahnaa in ay dabagasho oo masuuliyadan ay dall iyo dadba uhayaan ku ilaaliso oo dawladaha.
Maye qolyihiin aynu dooranay ee baarlamaanka ahaa ee iyagu horseedka u ahaa wareejinta masuuliyadan dayacan. Waxa hubaal ah in gebi ahaanba xubnihii baarlamaanka ee aynu dooranay in ay yihiin mooshin quutayaal aan dan kalahayn dall, dad iyo duunyo intaba waayo waxa hubaal ah in ay shillin iyo gaws ay dhaafsanayaa danta guud.
Waxa aad arkaysaa shacabkii reer Somaliland oo meehanaabaaya “petrol stationada”, marka ay lakulmaan petrol la’aan iyo shidaal la’aan waxa ay canaan dabada u qabanayaan “petrol stationada” shaqaale iyo maamulba. Iyaga oo isticmaalaaya ereyo ay kamid yihiin“meesha iska xidha, hadaad kacdeen dadka usheega, lugooyo ayaadtihiin, dadka maxaad ugu ciyaaraysaan,…” iyo qaarkaloo badan oo aan qaban dadkan “petrol stationada” haysta.
Dadweynihii reer Somaliland waxay canaanta kula dhacayaan meel aan ku haboonayn oo ah “petrol stationada”, oo aan runtii iyagu canaanlahayn isla markaana ka damqanaya ama ay naxdin faro badan ku hayso qofkan macmiilkiisa ah ee kusoo lugo’ay ee petrolka ka waayay. Dadweynaha qaarkood aflagaado ayay ugeystaan dadkan kaalmaha shiidaalka haysta ee ay kawaayeen shiidaalka.
Hadaba ogow dadweyne ama macmiil petro stationka aad ku xidhantahay wuxuu petrolka iyo shidaalkaba kaaga keenaa waa “BERBERA OIL TERMINAL”, haduu kasoo waayo isagu canaan malaha ee canaanta waxa leh cidii masuulka ka ah haama shidaalka, waxa kaloo macmiil canaanta leh cidii ku wareejisay ee iyana kaseexatay oo ah baarlamaan iyo dawlada.
Dadweyne ama macmiil marka aad martid hal ama laba kaalmood ee aad kaweydid shidaal ha noqoto su’aasha kowaad ee aad is waydiisaa
Ma shiidaalkiiba ka go’anBERBERA OIL TERMINAL?
Waayo kaalmuhu halkay ku xidhanyihiin waa “ BERBERA OIL TERMINAL”, markaa hadii shiidaal halkaa lagawaayo iyagu dhaliisha malaha ee dadweyne gaadhsii dhaliisha halka leh.
Dadweyne ogow kaalmuhu in ay hayaan masuuliyadan ay dayaceen qolyihii haamaha lagu wareejiyey, baarlamankii ansixiyey iyo dawladii ku wareejisayba. Waayo kaalmuhu waxay u boqoolaan wadamada aynu dariska lanahay iyaga oo shiidaalkan laga waayay berbera jecel in aanad dadweyne dareemin, habeeno ayay usoo jeedaan dharaarana way usii socdaan sidii ay dadweyne kuu qancinlahaayeen. Isaga oo uu kaaseexday ninkii masuuliyadaada qaaday oo aad adiguna markhaati ka ahayd markii uu qaadaayay.
Ugu danbayn waxa aan maqaalkaygan kusoo af-meerayaa dadweyne in aad ka kacdaan hurdada oo ay daan u seexan siday u seexdeen qolyihii masuuliyadiina dayacay. Dhaliishana aad gaadhsiisaan halkay ku haboontahay iyo cidii leh. Oo muwaadin marka aad gaadhigaaga shiidaal u weydid sida aad uga damaqanaysid ama aad uu dhaliilaysid qolada kaalinta si lamida u dhaliil oo uga damqo “haamaha shiidaalka berbera” ee iyagu madhan.Dadweyne kaalmaha shiidaalku inagama gayaan cay iyo dhaliil aynu dhakada kaga tuurno min shaqaale illaa maamul waayo wax inoo heeganba iyaga ayaynu haynaa.
Qalinkii: mohamoud ibrahim osman